Isobho lenkukhu e multivarka "Polaris" zingenziwa kusuka kunoma iyiphi ingxenye inyoni. Futhi ukulungiswa lokhu dish kuvunyelwe ukusebenzisa pasta, ilayisi isigamu peas, ibhali kanye nezinye izithako. Namuhla sethula wena kuphela isinyathelo ngesinyathelo indlela indlela yokwenza esiphundu futhi eqotho noodle okuzenzela.
Inkukhu isobho: iresiphi nesithombe izitsha
imikhiqizo Ukuze wenze okwehla esiphundu futhi okumnandi, kufanele pre-ukuthenga ezifana:
inkukhu drumsticks - 5 PC.
sifted ufulawa kakolweni - 1.7-2 izinkomishi;
naphakathi amazambane - 3 PC.
izaqathe Usayizi medium - 1 pc.
ezimhlophe isibani anyanisi - 2 amakhanda;
amafutha yemifino (sunflower) - 4-6 nezinkezo elikhulu;
Iqanda elikhulu - 1 pc.
usawoti esihle, allspice, amakhambi fresh - ukwengeza kwalo yedwa.
Qala ukupheka inkukhu isobho e multivarka "Polaris" kufanele kube uvivinyo ukuxuba noodle. Lokhu kudinga Iqanda eziphukile, engeza nalokho schepotochku usawoti kanye ufulawa kakolweni. Ngokulandelayo, izithako udinga uhlanganise kahle ukwakha uhlaka elukhuni. Ekupheleni inhlama roll ukuba eligoqiwe izingqimba eziningana, floured bese usika ibe noodle mncane futhi eside, okuyinto edingekayo ukuze abahlakaze ebhodini ahlabayo (for omiswe).
Ilungiselela inyama nemifino
Ngaphambi ukupheka inkukhu isobho nge amazambane kanye neminye imikhiqizo, bonke izithako uthenge alunge kahle. Ukuze wenze lokhu, grate isanqante amancane fake usike anyanisi. Ngokuqondene nezilimo eziyizigaxa amazambane, kufanele ukugeza uthathe cubes naphakathi.
Phakathi kwezinye izinto, kumele ngokucophelela ugeza inkukhu drumsticks futhi aqhubeke ngokushesha ukulungiswa kokudla.
Yokuwugazinga izingxenye izithako
Isobho lenkukhu e multivarka "Polaris" sasimnandi ikakhulukazi, uma kusengaphambili imifino gazinga shin ikumodi ezifanele ( "Zezıhlabane"). Ngakho, idivayisi liyadingeka ukubeka izaqathe inkomishi, izinkukhu inyama kanye anyanisi, bese ukunambitheka samafutha zemifino kanye nezinongo. Okulandelayo kumele isethwe ngenhla uhlelo bese ukulungiselela zonke izithako ingxenye yesine ihora, ibangele njalo.
Uma drumsticks inkukhu nemifino ziyahlukahluka ngombala futhi kancane kuphekeke, kubalulekile ukuba uthele amazambane kanye uthele amanzi abavamile ukuphuza ukuze isidlo wayengekho uketshezi kakhulu, kodwa hhayi obukhulu. Hlanganisa wonke izithako, idivayisi kufanele ivalwe bese ukusetha imodi isobho for isigamu sehora. Emva kwalesi sikhathi, inyama amazambane okuphekwe ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, kufanele ufake kancane noodle ezenziwe ekhaya, kanye kusawoti kanye namakhambi oqoshiwe. Kulesi Ukwakheka, isidlo sokuqala ufuna ukuma esimisweni esifanayo ngisho 7-9 imizuzu.
isobho Proper Khonza
Emva kwalesi sikhathi kubuya inkukhu umhluzi nge imifino zidinga ukuma kancane ngaphansi lid ivaliwe, bese enwetshiwe isobho Skeet nezivakashi ekhona isimo ashisayo. Ngaphezu kwalokho, lokhu dish kufanele uthele pepper amnandi kanye namakhambi fresh. Bon appétit!
Njengoba kushiwo ngenhla, isobho inkukhu multivarka "Polaris" ingalungiswa hhayi kuphela nokusetshenziswa noodle ezenziwe ekhaya. Ngokwesibonelo, isidlo esimnandi kakhulu ujikela nge okusanhlamvu irayisi, i-pasta encane, nokunye okufana nokolweni, nebhali, * okumele kuthuthukiswe ngamathumba. Isikhathi esining impela ukwenza inkukhu isobho nge amadombolo. Ukuze wenze lokhu, Beat amaqanda, engeza spoonfuls ambalwa ezinkulu zikafulawa, wayesezibeka izingxenye ezincane inhlama viscous ku umhluzi abilayo, ngemva kwalokho isidlo kufanele iphekwe eminye imizuzu 4-7.
Yimiphi indlela ukupheka inkukhu isobho ukhetha, kuyobahambela okumnandi noma kunjalo, futhi okubaluleke - wanelise futhi kuzuzise.
Indlela ukupheka esiphundu nesobho lamazambane - iresiphi okusheshayo
Amnandi isobho chickpeas
Utamatisi isobho - Umholi zokuhlonipha izitsha yokuqala
Mushroom isobho, elenziwe kusukela omisiwe porcini amakhowe: iresiphi ngesithombe
Democracy kanye State
Cuisine Ukraine - omunye the best in the world
Kanjani futhi kuphi ukuze uthole TIN may Citizen
Ukwakha ifenisha ekhaya induduzo
Anime "unkulunkulu abangenamakhaya": abalingiswa kanye nezici zabo
Indlela yokukhulisa i-bang esikhathini esifushane
Phila ngaphandle kobuhlungu